လက်မထပ်သင့်တဲ့ လူတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အကျင့် (၆)ခု -
လက်မထပ်သင့်တဲ့ လူတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အကျင့် (၆)ခု
Posted on March 23, 2018 March 30, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ဒီအချက် (၆)ချက် ငြိနေပြီဆိုရင် လက်ထပ်ဖို့ဆိုတာ ယောင်းပြန်စဉ်းစားဖို့ လိုနေပြီနော်..
ချစ်လွန်းလို့မှ လက်ထပ်ပြီးပြီဆိုတော့ ဒီလက်ထပ်ခြင်းဟာ တစ်ဘဝလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ကြသူတွေချည်းပါပဲ။ “ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်မှန်ကန်စစ်မှန်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ရှာတွေ့နိုင်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။ စစ်မှန်တဲ့လူဟုတ်ရင် ဖြစ်နေရင်တော့ သူ့အနားမှာ အမြဲရှိနေချင်မှာပါပဲ။” တဲ့။ လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ အမှန်တကယ်တော့ အရမ်းအရေးကြီးပြီး တာဝန်ကြီးတဲ့ ဘဝအာမခံချက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ယောင်းတို့လက်တွဲချင်တဲ့လူမှာ ဒီလိုအကျင့်မျိုးတွေရှိနေရင်တော့ ပြန်စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ပြောပါရစေ။
လူနှစ်ယောက်ပေါင်းစပ်ပြီး ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ အုတ်မြစ်က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ‘သူတို့နာကျင်ရမှာကြောက်လို့။ သူတို့သိသွားရင်ထားခဲ့မှာစိုးလို့။’ ဆိုပြီး ကိုယ့်အမှားကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်ဘဲ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့စကားတွေ ပြောလို့ လူတစ်ယောက်ကို မလိမ်ညာသင့်ပါဘူး။ ‘သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားက ယုံကြည်မှုကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး သတ်ပစ်လိုက်နိုင်တာ၊ ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်နိုင်တာဟာ သင့်ရဲ့အလိမ်အညာတွေနဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေပါပဲ’ ဆိုတဲ့ စကားလိုပေါ့။ ယောင်းရဲ့ လက်တွဲဖော်က လိမ်ညာတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ လက်ထပ်ဖို့ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုနေပါပြီ။
လူကြီးမဆန်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာ အသက် (၂၀) လောက်အရွယ်နဲ့ အသက် (၃၀) လောက်ပုံရောက်သည်ထိ ရင့်ကျက်နေရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အနည်းဆုံး အသက်၂၀နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အသိနဲ့ ဆင်ခြင်ဥာဏ်တော့ ရှိဖို့ လိုတယ်မဟုတ်လား? အသက် (၂၀) လောက်အရွယ်က အထက်တန်းကျောင်းသားလို ထိုင်ဂျစ်နေလို့ မရဘူးလေ။ ချွဲတတ်တာကတော့ ချစ်စရာကောင်းပေမဲ့ ကလေးဆန်လွန်းတာက အတိုင်းအတာတစ်ခု လွန်သွားပြီဆို တစ်သက်စာလုံး စဉ်းစားရမဲ့သူတွေအတွက် ဒုက္ခရောက်ရတော့တာပါပဲ.. အဆင်ပြေနိုင်မလားဆိုတာ ထပ်ကာထပ်ကာ ပြန်စဉ်းစားရပြီလေ။
ပြဿနာတစ်ခုခုကို ဘာရယ်ညာရယ်သေချာမသိသေးဘဲ ဒေါသအရင်ထွက်ပြပြီး အမြဲပေါက်ကွဲပြနေတတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ မလွယ်ဘူးနော်.. နှစ်ယောက်သားရန်ဖြစ်တဲ့အချိန် ဝုန်းဒိုင်းကြဲနေရာကနေ ချက်ချင်းပဲ ကိုယ်ထိလက်ရောက်လုပ်လိုက်တော့မလို၊ လက်ပဲပါတော့မလို ဆိုတာမျိုးမသိနိုင်တာမို့ အမြဲတမ်း ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့သာ သူ့အနားနေနေရမယ်ဆိုရင် တစ်သက်လုံးလက်တွဲသွားဖို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား? ယောင်းတစ်ဘဝလုံး အကြောက်တရားတွေနဲ့ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပါ့မလား?
Related Article>>> လက်မထပ်ခင်မှာ ယောင်းတို့လုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက်
(၄) ကလေးလေးတွေအပေါ် မကြင်နာတတ်ဘူး
လက်ထပ်တိုင်း ကလေးယူကိုယူရမယ် ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကလေးမယူချင်တာနဲ့ ကလေးတွေအပေါ်မကြင်နာတတ်တာက လုံးဝမတူပါဘူးနော်။ ကလေးတွေအရှေ့မှာ မပြောသင့်တဲ့စကားတွေအမြဲပြောနေမယ်၊ ကလေးတွေအပေါ် မာန်မဲပြီး ကြင်ကြင်နာနာ မဆက်ဆံတတ်တဲ့လူမျိုး ဖြစ်နေမယ်၊ အညှာအတာလည်း လုံးဝမရှိတဲ့သူမျိုး ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်တော့ လက်ထပ်ဖို့အတွက် အများကြီးပြန်စဉ်းစားဖို့လိုနေပါပြီ။ ကိုယ့်အပေါ်ရော သူဘယ်လောက် ကြင်နာနိုင်မှာတဲ့လဲ? ဗီဇဆိုတာ ဖျောက်မရတာမို့ ကြပ်ကြပ်စဉ်းစားဖို့ လိုမယ်နော် ယောင်းတို့..
သဝန်တိုတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်အထိပဲ ကောင်းပါတယ်။ အခုနှင်းပြောတာက အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလည်း ရုံးကလူတွေနဲ့မပေါင်းရ၊ အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း သူမပါလို့မသွားရ၊ ဟိုလူနဲ့ စကားမပြောရ၊ ဒီလူနဲ့ စကားမပြောရ၊ ဟိုလူနဲ့သဝန်တို၊ ဒီလူနဲ့ ဂျေဝင် နောက်ဆုံး ဆွေမျိုးနီးစပ် ဝမ်းကွဲအကိုတွေနဲ့တောင် ဆွဲပေးစားနေပြီဆိုရင် မတရားသဝန်တိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။ တစ်သက်လုံး ကိုယ်ကရော အိမ်ထဲပိတ်နေနိုင်ပါ့မလား?
ဥပမာ ကိုယ်က ကလေးလိုချင်တယ်ဆိုပါတော့။ သူကတော့ကလေးလုံးဝမလိုချင်တဲ့လူဖြစ်နေရော။ ဆိုတော့ ကလေးအများကြီးလိုချင်တဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကလေးလုံးဝမလိုချင်တဲ့ သူ ညှိကြဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ မညှိနှိုင်းဘဲ သူ့သဘောအတိုင်းပဲ လိုက်ပြီး ကလေးလုံးဝ မယူရဘူးဆိုရင်တော့ မတရားဘူးလေ နော်.. ဒါက ဥပမာ ပြတာပါ။ ဒီလိုပဲ တခြားကိစ္စကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေဖြစ်လာရင်ရော တစ်ဘဝလုံး သူ့သဘောအတိုင်း အမြဲလိုက်နေရမှာလား? ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်က ဘယ်မှာလဲ?
ဘဝတစ်ခုကိုအတူတွဲပြီး အောင်အောင်မြင်မြင်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင် လိုအပ်တာတွေအရမ်းများပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို အတူတူ ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် အခုနှင်းပြောထားတဲ့ အကျင့်တွေထဲကမှ တစ်ခုထက်ပိုရှိနေပြီဆိုရင်တော့ အချင်းချင်းပြန်လည် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ယောင်းတို့ ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်တဲ့သူ၊ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်သည်ထိ လောကဓံကို လက်တွဲရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်တဲ့သူ တစ်ထပ်တည်း ကျနိုင်ပါစေနော်..
Reference Link : Power of Positivity , Your Tango
ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ ဒီအခကျြ (၆)ခကျြ ငွိနပွေီဆိုရငျ လကျထပျဖို့ဆိုတာ ယောငျးပွနျစဉျးစားဖို့ လိုနပွေီနျော..
ခဈြလှနျးလို့မှ လကျထပျပွီးပွီဆိုတော့ ဒီလကျထပျခွငျးဟာ တဈဘဝလုံးအတှကျရညျရှယျကွသူတှခေညျြးပါပဲ။ “ပြျောရှငျတဲ့ အိမျထောငျတဈခုရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြဆိုတာ ကိုယျ့အတှကျမှနျကနျစဈမှနျတဲ့ လူတဈယောကျကို ရှာတှနေို့ငျခဲ့ခွငျးပါပဲ။ စဈမှနျတဲ့လူဟုတျရငျ ဖွဈနရေငျတော့ သူ့အနားမှာ အမွဲရှိနခေငျြမှာပါပဲ။” တဲ့။ လကျထပျတယျဆိုတာ အမှနျတကယျတော့ အရမျးအရေးကွီးပွီး တာဝနျကွီးတဲ့ ဘဝအာမခံခကျြတဈခုပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ယောငျးတို့လကျတှဲခငျြတဲ့လူမှာ ဒီလိုအကငျြ့မြိုးတှရှေိနရေငျတော့ ပွနျစဉျးစားသငျ့တယျလို့ပွောပါရစေ။
လူနှဈယောကျပေါငျးစပျပွီး ဘဝတဈခုတညျဆောကျဖို့အတှကျ ယုံကွညျမှုဆိုတဲ့ အုတျမွဈက အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ ‘သူတို့နာကငျြရမှာကွောကျလို့။ သူတို့သိသှားရငျထားခဲ့မှာစိုးလို့။’ ဆိုပွီး ကိုယျ့အမှားကိုယျတာဝနျမယူနိုငျဘဲ အခွအေမွဈမရှိတဲ့စကားတှေ ပွောလို့ လူတဈယောကျကို မလိမျညာသငျ့ပါဘူး။ ‘သငျတို့နှဈယောကျကွားက ယုံကွညျမှုကို အမွနျဆုံးနဲ့ အထိရောကျဆုံး သတျပဈလိုကျနိုငျတာ၊ ဖြောကျဖကျြပဈလိုကျနိုငျတာဟာ သငျ့ရဲ့အလိမျအညာတှနေဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတှပေါပဲ’ ဆိုတဲ့ စကားလိုပေါ့။ ယောငျးရဲ့ လကျတှဲဖျောက လိမျညာတတျတယျဆိုရငျတော့ လကျထပျဖို့ဆိုတာ ပွနျစဉျးစားဖို့လိုနပေါပွီ။
လူကွီးမဆနျဘူးဆိုတဲ့နရောမှာ အသကျ (၂၀) လောကျအရှယျနဲ့ အသကျ (၃၀) လောကျပုံရောကျသညျထိ ရငျ့ကကျြနရေမယျလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အနညျးဆုံး အသကျ၂၀နဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ အသိနဲ့ ဆငျခွငျဉာဏျတော့ ရှိဖို့ လိုတယျမဟုတျလား? အသကျ (၂၀) လောကျအရှယျက အထကျတနျးကြောငျးသားလို ထိုငျဂဈြနလေို့ မရဘူးလေ။ ခြှဲတတျတာကတော့ ခဈြစရာကောငျးပမေဲ့ ကလေးဆနျလှနျးတာက အတိုငျးအတာတဈခု လှနျသှားပွီဆို တဈသကျစာလုံး စဉျးစားရမဲ့သူတှအေတှကျ ဒုက်ခရောကျရတော့တာပါပဲ.. အဆငျပွနေိုငျမလားဆိုတာ ထပျကာထပျကာ ပွနျစဉျးစားရပွီလေ။
ပွဿနာတဈခုခုကို ဘာရယျညာရယျသခြောမသိသေးဘဲ ဒေါသအရငျထှကျပွပွီး အမွဲပေါကျကှဲပွနတေတျတဲ့လူဆိုရငျတော့ မလှယျဘူးနျော.. နှဈယောကျသားရနျဖွဈတဲ့အခြိနျ ဝုနျးဒိုငျးကွဲနရောကနေ ခကျြခငျြးပဲ ကိုယျထိလကျရောကျလုပျလိုကျတော့မလို၊ လကျပဲပါတော့မလို ဆိုတာမြိုးမသိနိုငျတာမို့ အမွဲတမျး ကွောကျကွောကျလနျ့လနျ့နဲ့သာ သူ့အနားနနေရေမယျဆိုရငျ တဈသကျလုံးလကျတှဲသှားဖို့ အဆငျပွနေိုငျပါ့မလား? ယောငျးတဈဘဝလုံး အကွောကျတရားတှနေဲ့ ဆကျလကျရှငျသနျနိုငျပါ့မလား?
Related Article>>> လကျမထပျခငျမှာ ယောငျးတို့လုပျသငျ့တဲ့ အခကျြ (၇) ခကျြ
(၄) ကလေးလေးတှအေပျေါ မကွငျနာတတျဘူး
လကျထပျတိုငျး ကလေးယူကိုယူရမယျ ဆိုတာမြိုးမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကလေးမယူခငျြတာနဲ့ ကလေးတှအေပျေါမကွငျနာတတျတာက လုံးဝမတူပါဘူးနျော။ ကလေးတှအေရှမှေ့ာ မပွောသငျ့တဲ့စကားတှအေမွဲပွောနမေယျ၊ ကလေးတှအေပျေါ မာနျမဲပွီး ကွငျကွငျနာနာ မဆကျဆံတတျတဲ့လူမြိုး ဖွဈနမေယျ၊ အညှာအတာလညျး လုံးဝမရှိတဲ့သူမြိုး ဖွဈနမေယျ ဆိုရငျတော့ လကျထပျဖို့အတှကျ အမြားကွီးပွနျစဉျးစားဖို့လိုနပေါပွီ။ ကိုယျ့အပျေါရော သူဘယျလောကျ ကွငျနာနိုငျမှာတဲ့လဲ? ဗီဇဆိုတာ ဖြောကျမရတာမို့ ကွပျကွပျစဉျးစားဖို့ လိုမယျနျော ယောငျးတို့..
သဝနျတိုတယျဆိုတာ အတိုငျးအတာတဈခုလောကျအထိပဲ ကောငျးပါတယျ။ အခုနှငျးပွောတာက အလုပျလုပျမယျဆိုလညျး ရုံးကလူတှနေဲ့မပေါငျးရ၊ အပွငျသှားမယျဆိုရငျလညျး သူမပါလို့မသှားရ၊ ဟိုလူနဲ့ စကားမပွောရ၊ ဒီလူနဲ့ စကားမပွောရ၊ ဟိုလူနဲ့သဝနျတို၊ ဒီလူနဲ့ ဂဝြေငျ နောကျဆုံး ဆှမြေိုးနီးစပျ ဝမျးကှဲအကိုတှနေဲ့တောငျ ဆှဲပေးစားနပွေီဆိုရငျ မတရားသဝနျတိုတဲ့အဆငျ့ကိုရောကျနပေါပွီ။ တဈသကျလုံး ကိုယျကရော အိမျထဲပိတျနနေိုငျပါ့မလား?
ဥပမာ ကိုယျက ကလေးလိုခငျြတယျဆိုပါတော့။ သူကတော့ကလေးလုံးဝမလိုခငျြတဲ့လူဖွဈနရေော။ ဆိုတော့ ကလေးအမြားကွီးလိုခငျြတဲ့ ကိုယျနဲ့ ကလေးလုံးဝမလိုခငျြတဲ့ သူ ညှိကွဖို့ လိုအပျလာပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ မညှိနှိုငျးဘဲ သူ့သဘောအတိုငျးပဲ လိုကျပွီး ကလေးလုံးဝ မယူရဘူးဆိုရငျတော့ မတရားဘူးလေ နျော.. ဒါက ဥပမာ ပွတာပါ။ ဒီလိုပဲ တခွားကိစ်စကွီးကွီးကယျြကယျြတှဖွေဈလာရငျရော တဈဘဝလုံး သူ့သဘောအတိုငျး အမွဲလိုကျနရေမှာလား? ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျပိုငျခှငျ့က ဘယျမှာလဲ?
ဘဝတဈခုကိုအတူတှဲပွီး အောငျအောငျမွငျမွငျတညျဆောကျဖို့ဆိုရငျ လိုအပျတာတှအေရမျးမြားပါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေို အတူတူ ကြျောဖွတျနိုငျဖို့အတှကျ အခုနှငျးပွောထားတဲ့ အကငျြ့တှထေဲကမှ တဈခုထကျပိုရှိနပွေီဆိုရငျတော့ အခငျြးခငျြးပွနျလညျ ညှိနှိုငျးတိုငျပငျဖို့ အကွံပွုခငျြပါတယျ။ ယောငျးတို့ ခဈြတဲ့သူနဲ့ လကျထပျတဲ့သူ၊ ဘဝတဈလြှောကျလုံး အိုမငျးမစှမျးဖွဈသညျထိ လောကဓံကို လကျတှဲရငျဆိုငျကြျောဖွတျတဲ့သူ တဈထပျတညျး ကနြိုငျပါစနေျော..
Tagged commitment, getting married, ultimate
Posted on December 5, 2016 Author
ဘဝခရီးလမ်းကို တစ်ယောက်တည်း လျှောက်ရတယ် ဆိုတဲ့သူ ရှားပါတယ်။ လူတိုင်းနီးပါးတော့ မိသားစု ညီကိုမောင်နှမ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း ရှိကြပြီးသားပါ တခါတလေကျတော့လည်း ထူးထူးခြားခြားလေး ဘဝမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် “သူငယ်ချင်းတွေ” တဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုးပါပဲ သူငယ်ချင်းကောင်း ရှိသလို အယောင်ဆောင်သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မှာကော ဘယ်လိုသူငယ်ချင်းမျိုးတွေရှိနေပြီလဲ။ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းကောင်းတွေဆိုတာက သူ့အကြောင်းစိတ်ထား ကိုယ်သိသလို ကိုယ့်အကြောင်းစိတ်ထားလည်း သူသိတယ် အရေးကြုံလို့တိုင်ပင်ရင် နည်းနည်းလောက် ဖောက်လိုက်ရမှ။ ပြီးတော့မှ ကိုယ့်ကိစ္စက သူ့ကိစ္စအတိုင်း အားတက်သရော ကူညီတတ်တယ်။ ချော်လဲရင် အားရပါးရရီတယ် ရီလို့ဝမှ လာထူပေးတယ်။ မတွေ့ရင်လည်း သတိရ တွေ့ရင်လည်း ကြည့်မရတတ်ဘူး ဆရာမဆီသွားရင် ကိုယ့်ကို နောက်ကတွန်းပို့တတ်တယ်။ ကိုယ့်ဟင်းအရင်ယူစားပြီး သူ့ဟင်းလည်း ထည့်ပေးတတ်တယ်။ မွေးနေ့ရောက်ရင်လည်း ပျော်အောင်လုပ်ပေးပြီး ပေါက်ကရလက်ဆောင်တွေ […]
Posted on September 15, 2017 September 18, 2017 Author Su Myat
ယုံလား? ယုံရင်ပြောပြဖို့ စိတ်ကူးပြီးသားကွယ် စတာပါ နောက်တာပါ မယုံလည်း ပြောပြမှာ..
ချစ်သူဘဝ ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ ကတောက်ကဆလေးတွေ ပြေလည်စေဖို့
Posted on July 7, 2017 October 12, 2017 Author Wathun
နားလည်မှုအပြည့်ရှိပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ Couple လေးဖြစ်ဖို့ဆို ဒါလေးတွေတော့ သိထားဖို့လိုမယ်နော်..
Job Description of Content Writer- Careers